Umhla My Pet » Kutheni Ufanele Umhla Intombazana nenja
ukubuyekezwa: Oct. 16 2020 | 3 min ukufunda
Okwangoku mna kubudlelwane nomfazi emangalisayo. Mhle, okrelekrele zobufazi. Yena zonke ubunokuyicela. Nto kuphela ukuba ngamanye amaxesha endibulala yinja yakhe encinane ukuba usoloko uqalisa ukuba nomona, xa ndithe ndamanga okanye ubabonise yakhe.
Ndinyanisa, Ndiyayithanda izinja kunye nam ukuba inja ukuba uhlala kwindawo umzali wam kodwa nangoku dikwa ngenxa yokuba andikwazi ukumphuza ngaphandle kokubeka i tinnitus evela kukukhonkotha ngayo inja yakhe. Ndada ndaqala ukubathiya loo nto incinane, De ndaqonda ukuba ukuze abe ngundoqo ulwalamano lwethu sonwabe.
Ndiyazi izandi crazy ngokupheleleyo kodwa ndandicinga okungakumbi ngobuntu kunye neempawu boyfriend yam, le nto ndaza ndabona ukuba inja yakhe ukuze luye lwaphembelela wakhe kakhulu kunokuba ndandicinga.
Ndade ayiqonde indlela isithandwa sam kuba ukuba wayengayi wakhulela ngendlela wamvumela ukuba ukuthatha unonophelo lomnye umntu. Ndafika kwisigqibo sokuba nangona nangoku endibulala xa inja yakhe akupheli umkhulungwane, Kufuneka ukubulela ngenxa umntu wagqibelela kwamnceda ukuba abe. Ekugcineni ngabona ukuba ukuwa eluthandweni nentombazana ngubani na ke isigqibo indilungeleyo mna kwendakha wenza inja.
Wafunda Thatha uxanduva
Ngamanye amaxesha kuba imvakalelo ukuba abantwana mihla ukukhulisa abazali babo, endaweni kokuba ephakanyiswe ngabazali babo. Ngenxa yokuba asifumani ithuba ukuphuhlisa ingqiqo uxanduva, kuba akukho mntu ufundisa oko kuthethwa ukuba abe noxanduva into okanye umntu.
Ukuba ufumanise ukuba le ntombazana ukuba uthandana licandeke akukho ngqondo uxanduva, mhlawumbi ayizange inja. Ibhinqa ekhula kunye nenja ngokuzenzekelayo ufunda ukuthatha uxanduva omnye ntle.
Yena ukuba bahambe naye, analo ukondla kuye yaye kufuneka ukuba kuye wezilwanyana xa egula. Zonke ezo zinto zifuna ukuba nembopheleleko. Xa uthandana nomntu intombazana onale ingqiqo uxanduva omnye ntle, kwakhona qiniseka mhle ukuba ingqiqo yakhe imbopheleleko enkulu xa kufikwa abantu.
Xa uthe wakha ucinge malunga nokuqala iintsapho kunye nebhinqa, kufuneka ngcono ziphelela ulwalamano kwintombazana evuma ukuba nembopheleleko.
Qiniseka ukuba ufumene Personality Caring
Ngaba uyayazi into kwinombolo enye eyenza abantu bonwabile kulwalamano? Hayi, into inani esithemba ukuba baphume kubudlelwane akunanto yakwenza ngesondo. Into oyifunayo kukuba umfazi lowo ukhathalela kuthi. Amadoda ufuna nabafazi kuba ubuntu onenyameko.
Oku akunanto yakwenza misbelief ukuba sifuna ukuba aphathwe nje ookumkani kubudlelwane. Sonke sifuna ukuba bacinga ukuba le ntombazana thina kunye naye usikhathalele ngokwenene. Ukuba kukho into enye uhlobo intombazana lowo bakulungele ukuthatha unonophelo ngaphezu enye intombazana, ngoko ke intombazana na inja.
Ekunyamekeleni inja kufuna ixesha elininzi nomonde. Andizange wadibana ntokazi inja kwaye akukhange kube ubuntu onenyameko. Qinisekisa ukuba intombazana ukuba ziphelela kubudlelwane kunye ufuna ukuthatha unonophelo ezinye izidalwa, kuquka nawe.
Ngaba akayiyo potato Couch
Ndiyazingca kakhulu ngemidlalo. Ndiyakuthanda ukuya njengomtyibilizi zize zibe nempepho. Ngenxa yokuba mna ndinomdla kokuchitha imini yonke phambi umabonwakude gama lam kwinqanaba Vitamin D ufumana ngokuhla, Nam ndinguye akanamdla ndithandana esofeni.
Ukuba intombazana ukuba uthandana na inja, unokuqiniseka kakhulu ukuba uyiyo nantoni na kodwa esofeni eyonqenayo. Ukuba awufuni ukuba inja poop lonke phantsi, kufuneka bahambe nenja yakho amaxesha ubuncinane kabini ngemini.
Ndiya qi ni ukuba intombazana lowo inja kunokuba uchitha ixesha lakhe ngaphandle kokuba esebenzayo, nokuba bachithe ixesha layo phezu kwesingqengqelo. Nangona mna ucatshukiswa inja isithandwa sam xa akaluyeki umkhulungwane, Ndiyakuthanda xa soyithabatha ukuhamba naye.